आईपीओ निष्काशनको तयारीमा आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स — Motivatenews.Com
आईपीओ निष्काशनको तयारीमा आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स
काठमाडौं – आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले आईपीओ निष्काशनको तयारी गरेको छ । धितोपत्र बोर्डमा कम्पनीले आईपीओ निक्ष्काशन अनुमति माग्दै निवेदन दिएको छ ।
इन्स्योरेन्सले हाल कायम जारी पूँजीको ३० प्रतिशत बराबरको आईपीओ निष्काशन अनुमति माग गरेको हो । इन्स्योरेन्सले प्रति कित्ता १०० रुपैयाँ दरले ६० करोड रुपैयाँ बराबरको ६० लाख कित्ता शेयर सर्वसाधारणको लागि निष्काशन गर्नेछ ।
आईपीओ निष्काशनको लागि कम्पनीले बिक्री प्रबन्धकमा सिभिल क्यापिटल तोकेको छ । इस्योरेन्सको आईपीओलाई केयर रेटिङ्ग नेपालले ‘केयर एनपी आईपीओ ग्रेड ४ प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको वित्तीय अवस्था औषत भन्दा कमजोर रहेको जनाउछ ।
हाल आईएमई लाइफको चुक्ता पूँजी १ अर्व ४० करोड रुपैंया रहेको छ । सर्वसाधारणमा ६० करोड रुपैंयाको शेयर जारी गरे पश्चात कम्पनीको चुक्ता पूँजी २ अर्व रुपैयाँ कायम हुनेछ । त्यसै गरी संस्थापक शेयर स्वामित्व ७० प्रतिशत र सर्वसाधारणको शेयर स्वामित्व ३० प्रतिशत कायम हुनेछ ।
अजोड इन्स्योरेन्सको शेयर नेप्सेमा सूचीकृत, भोलीबाट कारोबार खुल्ने, ओपनिङ रेञ्ज कति?
आज पनि बढ्यो सुनको मूल्य, पुग्यो १ लाख नजिक
झन–झन बढ्दै सुनको मूत्य, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?
सुन र चाँदी भाउ आजसम्मकै उच्च, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?